VideoHalkan: Ku dar video-ga Codsi Kasta | Martech Zone
VideoHere: Ku dar Fiidiyaha Codsi kasta
Talaado, Janaayo 19, 2010 Douglas Karr
Mid ka mid ah shirkadaha sharafta leh ee aan la shaqeeyo ayaa ah Cantaloupe. Waxay leeyihiin shey la yaab leh oo la yiraahdo Dib u iftiimiya inaanu martigelin doonno fiidiyowyadeena leh. Nidaamku wuxuu bixiyaa tayo aan caadi ahayn oo loogu talagalay martigelinta fiidiyowyadaada internetka, wuxuu ku siinayaa lahaansho ku saabsan fiidiyowyadaas, wuxuuna leeyahay qayb isku xirnaan dhab ah oo kugu habboon oo kuu oggolaanaysa inaad xiriiriyo toos ugu dhexeyso waqtiga fiidiyowgaaga. Lagu daray fiidiyow aad u fiican Analytics, waa xirmo adag!
Dadweynihii waaweynaa ee Cantaloupe hadda way bilaabeen VideoHalkan ka daawo (dhagsii hadaadan daawan karin fiidiyaha):
VideoHalkan ka daawo waa nidaam fiidiyow oo khadka tooska ah ah oo aad ku dhex geli karto codsi kasta oo web ah oo leh shaqo horumarineed oo aad u yar, oo aan lahayn API-yada, iyo maalgashiga IT-ga. Isticmaalayaashaadu waxay awoodaan inay tilmaamaan oo ay gujiyaan si aad u soo rogaan, u habeeyaan, oo u fiiriyaan fiidiyowyo gudaha interface-kaaga isticmaalaha. Waxay u egtahay inaad macaamiishaada siiso barnaamijyo fiidiyoow ah oo toos ah oo toos ah oo ku dhex jira dalabkaaga.
VideoHere ayaa sidoo kale loo qaabeyn karaa inay si toos ah ula shaqeyso koontadaada Backlight - waa nidaam fudud oo layaableh. Waxaan u qaabeeyey si loogu adeegsado qoraalkayga oo waxay qaadataa guji badhan si aad u soo geliso uguna soo duubto fiidiyow boggeyga hadda…. nuqul dambe iyo dhejin lambar koodh ah malahan! Haddii aad leedahay nidaam maareyn maareyn ah, waxaan kugula talin lahaa inaad fiiriso VideoHere oo ah beddel lagu sameeyo horumarkaaga.
Waa kuwan shaashadda ay ku shaqeyneyso balooggeyga (dabcan waxaan horeyba u qoray shey si aan ugu daro!):
Tags: riix halkan si aad u dalbatoTixgelinta Massxayeysiis hooyoDiiwaanka caadiga ahqoristaQoraalka
Sida loo been abuurto nambarada: Casharrada laga barto Twitter iyo Facebook
U Diyaarinta Sawiradaada Shabakada: Talooyin iyo Farsamooyin